दशैंतिहार नजिकिएसँगै चलायमान हुन थाल्यो अटोमोबाइल व्यवसाय – bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > दशैंतिहार नजिकिएसँगै चलायमान हुन थाल्यो अटोमोबाइल व्यवसाय
२० आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:४९ bampijhyala
२० असोज, बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । दशैंतिहार नजिकिएसँगै अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान बन्न थालेको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले थलिएको अटोमोबाइलको व्यवसाय दशैंतिहारलाई लक्षित गरी ल्याइएका स्किम र अफरहरूका कारण पनि बजार जुर्मुराउन मद्दत पुगेको हो ।
टाटा, ह्युन्दे, फोर्ड, रेनोँ, स्याङ्योङलगायत सवारी विक्री गर्दै आएका कम्पनीहरूले दशैंतिहारका लागि छूट तथा स्किम अफर ल्याएका छन् ।
दुईपांग्रेतर्फ टीभीएस, सुजुकी, यमाहाले पनि दशैंतिहार स्किम सार्वजनिक गरेका छन् । निषेधाज्ञा हटेसँगै शोरूममा सवारीसाधन बुझ्न आउनेको संख्या बाक्लिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
चैतको दोस्रो सातादेखि सरकारले लगाएको बन्दाबन्दी साउनमा अन्त्य गरेपछि दुईपांग्रे सवारीको बजार चम्किए पनि चारपांग्रे सवारीको बजार मन्द थियो । साउन अन्तिम सातापछि चारपांग्रे सवारीका लागि पनि शोरूममा ग्राहक देखिन थालेकोमा सरकारले भदौ ३ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाएको थियो ।
भदौ २४ गतेदेखि सरकारले निषेधाज्ञा अन्त्य गरेपछि बजार विस्तारै चलायमान बन्न थालेको नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।
‘पोहोरको जस्तो बजार छैन, ६ महीनादेखि बन्द व्यवसायमा ग्राहक अलिअलि देखिन थालेका छन्, दशैं नजिकिँदै गएपछि बजार बढ्छ भन्ने अनुमान छ,’ उनले भने ।
अघिल्ला वर्षहरूमा दशैंअगाडि नाडाले अटो शो गर्ने र त्यसपछि दशैंसम्म अटोमोबाइलको विक्री निकै हुन्थ्यो । तर, यस वर्ष नाडा अटो शो नभएपछि व्यवसाय पहिलेको भन्दा धेरै कम हुने व्यवसायीको भनाई रहेको छ ।
One thought on “दशैंतिहार नजिकिएसँगै चलायमान हुन थाल्यो अटोमोबाइल व्यवसाय”
यो छिजी किपा (हाम्रो फोटो) भन्ने स्तम्भमा चाँही केटी मान्छेको मात्रै फोटो छ त । दोलखामा केटा मान्छेहरु चाँही रहेनछन् कि कसो ।
सम्झनामा जेठ ३ २० आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:४९
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? २० आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:४९
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव २० आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:४९
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक २० आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:४९
अनाधिकृत रुपमा रकम संकलन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाको आग्रह २० आश्विन २०७७, मंगलवार ०९:४९